> Resource> Android> Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Sony Xperia
Dị nnọọ ịgbanwee na iPhone ka Sony Xperia, ma kọntaktị ka bụ na gị ochie iPhone. Na ị na-doo anya na kọntaktsị na iPhone-na-emekarị echekwara na ebe nchekwa ekwentị. N'ihi ya, iji detuo kọntaktị site iPhone ka Sony Xperia, i nwere abụọ ngwọta. Onye na-agbakwunye kọntaktsị na gị Sony Xperia otu otu aka, nke bụ nnukwu ọrụ, karịsịa mgbe i nwere ọtụtụ narị kọntaktị. Ndị ọzọ ụzọ bụ iji nweta enyemaka site n'aka a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ.
Site iche, ọ bụ ihe ezi uche na-eji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ. Ebe a na-abịa a ọkachamara ekwentị transfer ngwá ọrụ aha ya bụ Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Na 1 click, kọntaktị niile na gị iPhone ga-agafere Sony Xperia. N'ụzọ dị ịtụnanya, ngwá ọrụ a ọbụna ike gị nyefee kọntaktsị na gị iCloud, Exchange, Hotmail ka Sony Xperia, ebe ekwentị, dị ka ogologo oge dị ka ị banye na ihe ndekọ na gị iPhone tupu nyefe.
Ibudata ngwá ọrụ a na kọmputa gị. Ugbu a, na-ahapụ 'na-agbalị Ohere version. Ọ bụrụ na ị a Mac ọrụ, biko na-yiri nzọụkwụ.
Otú nyefee kọntaktị site na iPhone ka Sony Xperia
Lelee mfe nzọụkwụ n'okpuru ịmụta otú ịkwaga iPhone kọntaktị na Sony Xperia.
Nzọụkwụ 1. Launch MobileTrans na kọmputa
Nke mbụ niile, wụnye na ẹkedori a na ekwentị transfer ngwá ọrụ na kọmputa. Nke a ga-eme ka elu isi window na kọmputa gị na ihuenyo. Pịa Malite.
Nke a software arụ ọrụ nke ọma na iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 4S, iPhone 4 na iPhone 3GS na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ iPhone na Sony Xperia na kọmputa
Jikọọ gị iPhone na Sony Xperia na kọmputa site na iji eriri cables. Nke a na ekwentị transfer ngwá ọrụ ga-ozugbo ịchọpụta na ngwaọrụ, na mgbe ahụ na-egosi ha na isi window. Dị ka ị na-ahụ, gị iPhone na-egosipụta na-ekpe, na Sony Xperail ke ziri ezi.
Na ala-nri akuku, nne Mmetụta anya Doro Anya data tupu oyiri. Ọ ga-enyere gị wepụ niile ugbu a kọntaktsị na Sony Xperia ịzọpụta kọntaktị site na iPhone. Ọ bụrụ na ị na-enweghị ebumnuche na, dị nnọọ na-Doro Anya data tupu oyiri kpacharaghị.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị ga-amasị nyefee data, sị ederede ozi, kalenda, kọntaktị, videos, music na foto site na Sony Xperia ka iPhone, ị nwere ike pịa tụgharịa na-agbanwe ha ebe. Mgbe ahụ, na-eme ka m na-agwa n'okpuru.
Nzọụkwụ 3. Nyefee iPhone kọntaktị na Sony Xperia
N'ụzọ doro anya, i nwere ike nyefee kọntaktsị, kalinda, SMS, music, foto na vidiyo si iPhone ka Sony Xperia. Nọgide nnọọ na-kọntaktị enyocha. Mgbe ahụ, pịa Malite Copy. A window Pop elu, site na nke ị nwere ike ịlele kọntaktị transfer usoro. Mgbe kọntaktị niile na-depụtaghachiri ka Sony Xperia, ị kwesịrị ị pịa OK rụchaa nyefe.
Download MobileTrans idetuo kọntaktị site na iPhone ka Sony Xperia.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ jikwaa kọntaktị, SMS, ngwa ọdịnala, photos, music na vidiyo na gị Sony Xperia, biko atụgharị Wondershare MobileGo for Android. Ọ bụ ihe dị mfe na-eji Android njikwa-enyere gị aka jikwaa ihe niile na gị Sony Xperia.
Olee otú ka Wepụ Google Chrome bụla na ngwaọrụ
5 Ihe na-eme na Your New akporo ekwentị
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gị ada ada jikọọ Wondershare MobileGo?